LiVES, yekare uye diki inozivikanwa vhidhiyo mupepeti kana iwe uchitsvaga dzimwe nzira | Linux Vakapindwa muropa
Kana isu tichifunga nezvekugadzirisa vhidhiyo, sekureba sekunge isu tisina kana sarudzo yaunofarira, danho rekutanga kufunga nezvekuti ndeupi mupepeti watiri kuzoshandisa. Izvi zvinogona kuva hope dzinotyisa, uye hope dzinotonyanya kuomarara kana tikashandisa Linux matinayo Kdenlive, Openshot, Cinelerra, Olivia inowanikwa ... Ini ndinosarudza Kdenlive nekuti haimbondikundikane uye nekuti kune dzidziso dzekuita nenzira chero chinhu, asi hazvikuvadze kuyedza dzimwe nzira senge ZVIMWE.
Vazhinji venyu pamwe muchaverenga nezvazvo iyi vhidhiyo mupepeti kekutanga, asi hazvisi zvitsva. Shanduro yayo yekutanga yakaburitswa anopfuura makore gumi nemanomwe apfuura uye svondo rino vhezheni 3.0.1 yesoftware yaburitswa, yekutanga yekugadzirisa yekuvandudza yeakateedzana 3. LiVES ine zvese zvatinoda kuti tiite mavhidhiyo edu sezvatinotarisira, asi ichokwadi kuti inogona kuve yakajeka. Zvichida ndosaka asiri iye ane mukurumbira sevamwe ve "vamwe vake".
1 LiVES, dombo dzekare rinokwanisa zvese ... kana ukajaira kurishandisa
2 Inowanikwa pakupera kwegore yeWindows
LiVES, dombo dzekare rinokwanisa zvese ... kana ukajaira kurishandisa
LiVES inowanikwa mupakeji fomu yezvakawanda zvekuparadzirwa kweLinux, pakati pavo pane Debian, Ubuntu, Fedora, Suse, Gentoo, Slackware, Arch Linux, Mandriva neMageia. Mune kumwe kugovera, kwakadai seUbuntu uye zvigadzirwa zvayo, inowanikwa munzvimbo dzepamutemo, saka kuiswa kwayo kuri nyore sekuenda kune software centre, kutsvaga "hupenyu" nekuisa mupepeti kana kuvhura terminal uye typing "sudo apt isa hupenyu »pasina makotesheni. Kana tikadaro, isu tichaisa LiVES vhezheni 2.10.x, asi isu tinogona kushandisa iyo UbuntuHandbook repository kuisa LiVES 3.0.1:
Pane imwe chete yaiswa, tinogona kumhanya LiVES senge chero imwe application, kubva ku app kuvhura zvekugovera kwedu (kana nekuchaipa "hupenyu" pasina makotesheni mune terminal). Kekutanga nguva patinoimhanyisa, kubva kune icon inoratidza kuti ndeyekare uye inogona kuvandudzwa, iyo yekumisikidza wizard inotanga:
Isu tinoratidza nzira inozoponeswa mapurojekiti. Zvinokurudzirwa kusiya iyo default nzira.
Inoita bvunzo kuti tione kana tichigona kumhanyisa chirongwa (Chinotevera).
Isu tinoratidza kuti ndeapi maodhiyo edhiyo yatichazoshandisa.
Uye isu tinosarudza iyo interface pakati pe multitrack uye Clip Hodhi Mode.
Kana isu tichida kuona kuti izvo zvatinowedzera kuchirongwa hazvikundikane, isu tinofanirwa kuzviwedzera kubva kuFaira / Vhura faira kana dhairekitori menyu. Kana isu tichivadhonza kuenda kuhwindo, zvirinani kwandiri, zvinokundikana. LiVES ine marudzi ese ezvekushandisa uye mhedzisiro uye vhezheni 3.0 yakauya nezvinhu izvi zvitsva.
Ipa runyararo kumagumo evhidhiyo kana zvichidikanwa panguva yekupa.
Kunatsiridzwa kune yakavhurikaGL Playback Plugin, inosanganisira yakawanda kutsetseka playback.
Dzorerazve Advanced Ongororo yeiyo yakavhurikaGL Kutamba Plugin.
Inotendera "Zvakwana" muVJ / Pre-dhizaina mafuremu ese.
Kugadzirisazve kodhi yezvekuverenga nguva yenguva panguva yekutamba (zvirinani a / v sync).
Wongorora rwekunze odhiyo uye odhiyo yekurekodha kuti unatsiridze kunyatso uye shandisa mashoma CPU macircule.
Otomatiki inochinja yemukati odhiyo kana uchipinda multitack modhi.
Inotaridza mamiriro akakodzera emhedzisiro (pa / kudzima) nekuedzazve mhedzisiro mapper hwindo.
Inobvisa mamwe mamiriro erudzi pakati peyekuteerera uye vhidhiyo tambo.
Yepamhepo vhidhiyo yekurodha pasi yekuvandudza, clip clip uye fomati izvozvi zvinogona kusarudzwa nekuwedzera iyo yekuvandudza sarudzo.
Referensi kuverenga kwave kuitiswa kune chaiwo-enguva mhedzisiro zviitiko.
Iyo huru interface yakanyoreswa zvakanyanya, kuchenesa kodhi uye nekugadzirisa kwakawanda kuona.
Yakagadziridzwa kurekodha kana vhidhiyo majenareta ari kushanda.
Kunatsiridzwa kweprojekitiM firita inoputira, kusanganisira SDL2 rutsigiro.
Wakawedzera imwe sarudzo yekudzosera Z kuraira mu multitrack composer (kumashure mashure anogona ikozvino kuwanda kumberi iwo).
Yakawedzera rutsigiro rwe musl libc.
Yakagadziridzwa shanduro dzeUkraine
Inowanikwa pakupera kwegore yeWindows
SaKdenlive nemamwe akavhurika-sosi edhitaina yeLinux, LiVES ichaita leap kuWindows gare gare gore rino. Ini pachangu, ndiri munhu asingade shanduko, ndinosarudza kushandisa software uye kuishandisa kusvikira yatadza, saka ndichaenderera neKdenlive paLinux neWindows (iMovie pane macOS), asi iyi sarudzo ine trajectory, zvirinani maererano nehukuru, inomutsigira. Iwe unofungei nezve LiVES?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » LiVES, yekare uye isingazivikanwe vhidhiyo mupepeti yeavo vachiri kutsvaga dzimwe nzira